Kedu otu esi atụ ụkwụ gị maka igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Etu esi atụ ahụhụ maka ịgba ịnyịnya ígwè - edepụtara ajụjụ na azịza ya
Etu esi atụ ahụhụ maka ịgba ịnyịnya ígwè - edepụtara ajụjụ na azịza ya
Kedu otu esi atụ ụkwụ gị maka igwe kwụ otu ebe?
Ijitụọn'ime gịụkwụ, guzo na gịụkwụodika ubu obosara iche na akpụkpọ ụkwụ gị anya, mgbe ahụtụọsi n’ala bido n’apịtị gị. I nwekwara ike iji pensụl kaa akara n'ime gịụkwụn’elu mgbidi natụọya mechara.
Mgbe ị bịara ịzụ igwe kwụ otu ebe, ọ dị ezigbo mkpa ka ịhọrọ oke nha. Enwere ọtụtụ ntọala dị iche iche ị nwere ike ime na igwe kwụ otu ebe gị dị ka azuokokoosisi, oche, ọbụnadị oche ma ọ bụ ogologo crank - mgbanwe dị iche iche ị na-eme na igwe kwụ otu ebe ga-emetụta arụmọrụ na mmetụta. Zụta igwe kwụ otu ebe nke pere mpe ma ọ bụ buru oke ibu agaghị adị gị ka ọ dị mma.
Anyị ga-enyere gị aka ịhọrọ oke igwe kwụ otu ebe maka gị. (egwu electronic obi ụtọ) - Tupu anyị amalite, ka m kọwaa sizing. N'ihi na ọ naghị adị mfe ịchọpụta igwe kwụ otu ebe dabere na ogologo gị.
Ọtụtụ emepụta ga-kpọọ ha igwe kwụ otu ebe nha obere, ọkara, nnukwu, wdg Ma ndị ọzọ ga-labeelu ha na a ọnụ ọgụgụ dị ka nke ọma. Ndị a n'ozuzu ha sitere na 48 ruo 62, nke ahụ dịkwa ka ịtụ nha na sentimita asatọ site na nkedo dị n'okpuru ebe a dị n'elu nke elu tube.
Agbanyeghị, ọ nweghị ihe na-agbanwe agbanwe dị ka ndị na-agba ịnyịnya si ele wiil ha. Naanị n'ihi na Ọ bụrụ na ịnwee 54 oge niile site na otu akara, nke ahụ apụtaghị na 54 sitere na akara ọzọ ga-adabara gị. Irè oche tube dị irè bụ otu n'ime ụzọ atọ dị ezigbo mkpa iji tụọ igwe kwụ otu ebe ọzọ. Therzọ abụọ ọzọ ị ga-esi tụọ igwe kwụ otu ebe bụ nke a maara dị ka iru na nchịkọta, ma ndị a bụ ụkpụrụ a ma ama n'ụwa niile.
Ihe iru a na-ezo aka n’ahịrị etiti site na ihe nkwado dị n’ala ruo n’etiti akara nke isi ọkpọ. Na nchịkọta gị metụtara otu ọkwa yiri nke ahụ. ma mgbe ahụ na-agụnyekwa elu igwe kwụ otu ebe.
Ọ nwere ike ịdị ka obere mgbagwoju anya, mana enwere olile anya na ndịna eserese gị ga - enyere aka. Odi ka izuta uwe ogologo ọkpa. Ogologo ọkpa na-abịa n'úkwù, mana ha na-ejikwa ogologo ụkwụ.
Dịkwa ka ịzụ uwe ogologo ọkpa, ịkwesịrị ịnwale ọtụtụ ụzọ abụọ ma ọ bụ gbagoro ọtụtụ igwe kwụ otu ebe iji chọta ihe dabara adaba maka gị - mana tupu anyị abanye na nke ahụ, ka anyị nweta nke ahụ Ka anyị tụlee otu ihe dị mfe ma bụrụ isi. Ọfọn, gịnị bụ ogo sadulu anyị na kedu ka anyị si achọta ya? Ugbu a ọ dị mfe ịchọta mgbidi dị otú ahụ, banye igwe kwụ otu ebe, tinye aka abụọ na aka ahụ, pịa pedal ruo elekere isii, tinye ikiri ụkwụ gị na pedal. Now kwesịrị ugbu a chọta ụkwụ gị kwụ ọtọ.
Mgbe ahụ ị nabatara ya ma weghachi ya n'ọnọdụ ya, ị ga-ahụ na ụkwụ gị dị ntakịrị ntakịrị. Ọ dị mfe n'ezie ma ọ dị oke irè n'ịchọta ihe ịnyịnya kwesịrị ekwesị maka gị - heightchọta ogo ziri ezi ziri ezi dị mfe ma ọ bụ n'ihi na ị nwere ọtụtụ leeway iji gbanwee. N'ihe banyere idozi iru gị, ị ga - amachaghị nke ọma na mgbanwe ị nwere ike ịme, n'agbanyeghị na ọ ga - adị mkpa maka nkasi obi gị na igwe kwụ otu ebe.
Ugbu a dịgasị iche iche nke anyịnya igwe dị iche iche n'ime a emeputa, kamakwa site ika ka ika na nke a dabere na ụdị nke na-agba ịnyịnya ígwè na-ezubere maka, kamakwa na nke gị igwe kwụ otu ebe d. hụ e France n’ozuzu oke ogologo ma dịkwa oke ala. Ọ bụ ezie na igwe eji ajị anụ ajị agba dị mkpụmkpụ ma too ogologo.
Nọmba ndị metụtara etu igwe kwụ otu ebe si na-eme ka akpọrọ Stack and Reach, ọ bụrụ n’icheta ndị ahụ ịgba ịnyịnya ígwè n’oge gara aga, ị nwere ahụ iru ala karịa ịnya ụgbọ ịnyịnya, ma ọ bụ obere obere mgbanwe, ị nwere ike ịhọrọ ihe dị mkpumkpu ma to ogologo. N’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị gbaa ọsọ, o yikarịrị ka ị ga-ahọrọ ihe toro ogologo na ala. Dịka ọmụmaatụ, nke ụdị geometry dị iche iche, Canyon kewara igwe kwụ otu ebe ya atọ n'ime ụdị dị iche iche, Pro, Pro Sport, na Sport Geometry.
Yabụ kedu ka ị ga - esi kpebie ebe aka gị ga - aga? Ọfọn nke ahụ ga-adabere na ihe ole na ole. Ọ bụrụ na ị nwere ogologo aka na ogologo azụ, ma ị na-agbanwe agbanwe, ị nwere ike tinye onwe gị n'ọnọdụ dị ogologo, obere. Ọ bụrụ na ị na-erughị mgbanwe, ma ọ bụ nwere a mkpumkpu azụ na ogwe aka, mgbe ahụ abụghị bụ n'ezie bụkwa ikpe.
N'ikpeazụ, ụdị ịnya ịnyịnya nke ị ga-eme ga-arụkwa ọrụ; Otú ọ dị, ọ bụrụ na sadulu ahụ dị n'ọnọdụ ziri ezi, ubu ya na akuku ụkwụ kwesịrị ịdị ogo 40 ruo 45 na ntanetị n'okpuru wiil ndị ahụ, na ogwe aka gị 80 ruo 90 ogo n'elu ogwe Youkwesịrị ịhazigharị mkpanaka gị, nke a dịtụ mfe ma dịkwa mfe site na ịhazigharị ebe ndị dị anya, na-akụtu ha ma na-etinye ha n’okpuru ka ha bulie mkpanaka gị aka ma ọ bụ belata ya. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazigharị usoro ahụ, nke ahụ na-enweta ntakịrị aghụghọ. O yikarịrị ka ị ga-azụta azuokokoosisi ọhụrụ, ma ọ bụ na nke m, ị ga-achọ gbanwee ntọala ntọala niile.
Agbanyeghị, ọ bụrụ n ’ị mụbara mkpuru osisi gị karịa inch ma ọ bụ abụọ, ị kwesịrị inwe ogo etiti dị iche. Ma ọ bụ ezie na ị nwere ike ịmegharị sadulu gị ka ọ laghachi na sentimita ole na ole, ọ gaghị eme ya iji belata iru gị. Akpịrịkpa gị naanị ụkwụ ga-achịkwa gị, yabụ tinye ya n'ọnọdụ ziri ezi ma hapụ ebe ahụ. (egwu kọmputa na-atọ ụtọ) - Ya mere, ịchọtala igwe kwụ otu ebe ị hụrụ n'anya nke ukwuu, mana ị nọ n'etiti nha.
Ikekwe ọ bụ 54 ma ọ bụ 56, ọkara ma ọ bụ nnukwu. Ugbu a ọdịiche dị n’etiti igwe abụọ a bụ nchịkọta na oke. Ogologo a bu nke a, na nchịkọta di ebe a.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ogologo, ị ga-enwe nnukwu oche oche, nke pụtara na ị ga-achọ aka ahụ ntakịrị elu, yabụ nchịkọta ahụ, mana ọ bụrụ na ịchọrọ igwe racy nwere mmetụta mara mma, ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ga-ahọrọ obere igwe kwụ otu ebe tinye ogologo azuokokoosisi. Agbanyeghị, ọ bụrụ n ’ịchọrọ ọnọdụ kwụsiri ike ma kwụ ọtọ na igwe kwụ otu ebe, mgbe ahụ, jiri igwe kwụ otu ebe a gbagoro maka igwe buru ibu. Mee elu mee ala, ị nwere ike họrọ a etiti size dabere naanị gị elu na sadulu elu.
Mana ị ga-achọ ịchọpụta ụdị ụdị ịchọrọ. Chọrọ ogologo na ala ma ọ bụ ị chọrọ ziri ezi? Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, nye ya nnukwu mkpịsị aka ukwu na maka esi nweta isiokwu, gịnị ma ị pịa m?
Kedu otu ị ga-esi tụọ igwe kwụ otu ebe?
Bikestụrụ site na oche oche ha ogologo. Ihe a na-esite na etiti ala nkwado (BB) ma ọ bụ n'etiti etiti ahụ na-agbakwunye ogwe aka ahụ. Nke a dị iche na ika, ụfọdụtụọn'elu ebe ọkpọkọ elu ahụ na-ezute tube oche, ma ọ bụ ọbụna n'etiti etiti ọkpọkọ ahụ.
Kedu ịdị elu nke ịnyịnya ígwè 26 dị?
'26”Wheel size zuru okè n'ihi na ọtụtụ ndị okenye na aịdị elun'elu ụkwụ isii. Ọtụtụ n'ime njegharịanyịnya igwena ngwakọanyịnya igwebia na 700C metric wiil, nke a makwaara dị ka 29-inchwiil.
Ogologo nkenke gisadulu dị mkpa maka ọnọdụ kachasị mma na ịnya ịnya ịnyịnya ibu. Mgbe ị na-anọdụ na sadulu, maụkwụ kwesịrịirualana bọọlụ nkeụkwụ gị kwesịrịịbụimetụ ala. Aka ejiri naigwe kwụ otu ebe gị kwesịrịkwesịrị ka akara nanke gisadulu ma ọ bụ ubé n'elu sadulu.
Kedu ihe dị njọ na egbe egbe gas ebe a na ihe omume a anyị na-ekwu maka ụdị Mixby Excising na Bike Fitting emeela m ụfọdụ ederede gbasara ịkọ igwe, yabụ otu esi ahọta geometry na ogo nke igwe kwụ otu ebe maka gị na mgbe ahụ anyị ga-imeghari igwe kwụ otu ebe na anyị mkpa anyị ịnya anyị ịke anyị arụmọrụ na ahụ anyị n'ezie na mgbe ahụ m nnọọ kwuru okwu nsogbu na-akpọ mkpịsị ụkwụ yitewere ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ yitewere nke pụtara na m na-enweghị ya ebe a ma nke ahụ ga-apụta na m nwere Akpụkpọ ụkwụ m nwere ike, enwere m ike ịme ya n'ụzọ ahụ, ma eleghị anya ọ bụ ntakịrị ntakịrị, mana enweghị nsogbu nsogbu ọ bụla na igwe kwụ otu ebe a na mgbe m kwuru na isiokwu ahụ, ọtụtụ n'ime unu, ọkachasị na ọwa m Polish, nwere, bidoro jụọ m, ọ pụtara na m metụrụ ya aka? Ihu akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ m pụtara na etiti ahụ pere mpe pere m m azịza ya bụ mba, ọ pụtaghị na ị ga-agbanwerịrị ogo gị, mana ọ bụrụ na ọ dị ọtụtụ, ọ bụrụ na ọ bụ? Ọ dịka na ị na-emetụ nsogbu gị aka na nsogbu gị, nke nwere ike ịbụ nsogbu, mana n'agbanyeghị nke ahụ, enwere ọtụtụ jiometrị dị na igwe kwụ otu ebe na mgbe ụfọdụ mmechi a ga-adị ntakịrị.
Kedu ihe m chere anyị kwesịrị iburu n’uche? Ànyị kwesịrị icheta nanị ihe anyị ji akwọ ụgbọala? kedu ka anyị ga-esi jiri igwe kwụ otu ebe kedu ihe anyị ga-eji igwe kwụ otu ebe maka ma ọ bụrụ na ị masịrị ka m gosi gị mkpịsị ụkwụ nke na-eme mgbe ebugharị na gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ nnukwu nnukwu gbagọrọ agbagọ ebe a ka ọ wee bụrụ ihe na-adịghị ala ala pụtara ma ọ bụ n'okporo ụzọ ma ọ bụ obodo. Yabụ ọ bụrụ na ị na-arụ igwe eji arụ ọrụ maka njem na ikekwe ọbụlagodi ụzọ ụkwụ ma ọ bụ ọbụlagodi na ị na-agagharị na obodo, ịkwesịrị iche echiche karịa gbasara mkpịsị ụkwụ ahụ n'ihi na a ga-enwe mmụgharị dị nkọ na obere ọsọ ma ọ ga-abụ naanị dị ize ndụ nye gị ma ọ ga - adịrị mfe ịda yabụ kedu ka anyị ga - esi chọpụta ma ọ bụrụ na anyị nwere mkpịsị ụkwụ n'elu etiti ma ọ bụ na ọ bụghị nke na - adịghị aba uru? s ogologo nke ọkpọkọ a maara nke ọma na ụfọdụ ndị nrụpụta agaghị enye gị akụkụ ndị ọzọ, kpọọ ogologo nke tube kacha elu. myCannondale ebipụ 10 bụ 50cm ogologo na ogologo nke elu tube bụ 50cm na-agwa gị ihe banyere okpokolo agba banyere nke ma ọ dịghị agwa gị ihe ọ bụla banyere jiometrị ugbu a ihe m na-ekwu ka m na-egosi gị ka anyị kwuo na nke a bụ Top tube bụ na m na-agbanwe agbanwe akụkụ nke ọkpọkọ elu nke mere na ọkpọ m dị elu ugbu a bụ 56cm, ọ bụrụ na ọ kpụrụ ya, ọ ga-abụ akụkụ 55 dị ka 54 a dị ka 52 a ka ị pụrụ ịhụ ogologo nke ngbanwe dị elu nke ọkpọkọ dị n'elu ebe a, mana ọdịiche dị n'agbata nkwado ala na ụkwụ ihu anaghị agbanwe, ya mere ogologo ogologo tube bụ otu n'ime akụkụ, mana nke ka mkpa bụ nso, ọdịiche dị n'agbata ala ala gị na nke gị na isi gị tube abụghị ya mere ma kehoraizin nri nke mere na a anya n'etiti ebe a na nke a ga-abụ dbe i nwere olileanya na ị pụrụ ịhụ na ọ ga-abụ m nso ya mere m maara n'ezie ogologo oge eku bụ n'ihu m na bụ ihe nke ahụ anaghị agbanwe agbanwe bụ ebe m na-akụ ụkwụ ma achọrọ m ịkụ aka w ebe nkem na ebe ogwe akam di ma n’ezie ogha n’iru gha adi nma ma oburu na i jiri ya mgbe ichoro iru ma obu zuta igwe eji agba okuko, dika ima na nyocha m gosiri gi otu relay a na ikwesiri ọzọ na akaụntụ nke mkpịsị ụkwụ yitewere mbipụta m na-egosi gị ihe bụ ihe dị iche na bụ ihe dị iche n'etiti abụọ ndị a okpokolo agba a bụ 54 centimeters kapten bụ 56 centimeters m ga-dobe si ndụdụ ke kpọmkwem otu ebe ọ bụ naanị enịm dị ka nke ahụ ma ugbu a, ka anyị gaa na igwefoto ma ị ga - ahụ ebe aka mgbodo ahụ gwụrụ, ị ga - ahụ nnukwu ọdịiche dị n'etiti Cannondale na n'ezie, ọ bụ nnukwu ọdịiche, na ezigbo igwe kwụ otu ebe a, m ga - enwe ọtụtụ ihe ị ga - n'ihi na m na nkwado mgbodo ket dị ka a di na nwunye nke sentimita asatọ site na gịnị mere na ọ bụrụ na nke a bụ mkpumkpu na bụ 54 cm ogologo na bụ a obe na bụ ihe aCX Cyclecross bike ya mere na ọ bụ mkpumkpu ka i nwere a ọzọ ziri ezi ọnọdụ na bracket braket bukwa bracket is hig ya n'ihi na ọ bụ acyclocross igwe kwụ otu ebe, ya mere akpụkpọ ụkwụ yitewere nsogbu bụ 54 centimeters na etiti a ka ihe atụ adịghị mma maka m dere m ụfọdụ Kendall synapses m nwere id na otu ọ bụ aluminom 154 centimeters na m nwere mkpịsị ụkwụ a overlap nsogbu ma Naanị m nwere ọzụzụ Ion eji maka ụfọdụ ị marala ikike ịnya ụgbọ ala na enwebeghị m nsogbu a. Echere m na ọ dịtụghị mgbe m ji akpụkpọ ụkwụ m na-emetụ taya ihu ihu mgbe m na-agba ịnyịnya ka m wee nwee ike iji 54 mana enwere m mmetụta ka mma na 56 na dịka ị nwere ike ịhụ na enweghi nsogbu ọ bụla ebe a Ọ bụrụ na i nweela ogwe ma chee, ọ dị mma , ọ bụrụ na Dennis dị otu a, naanị ihe m kwesiri ime bụ dochie etiti m, ugbu a ịkwesighi ime n'ihi na enwere aghụghọ ole na ole ị nwere ike n naanị idozi nsogbu a, otu n'ime ha na-agbanwe ndụdụ ahụ n'agbanyeghị na onye ọ bụla na-etinye na isi tube nke nwere a ụfọdụ n'akuku na i nwere ike ghara ịgbanwe na gị igwe kwụ otu ebe ebe a, ma ndụdụ nwere ike ịbụ ọbụna dị iche iche ogologo ma dị iche iche akụkụ na dị iche iche dropout offsets dị ka ị pụrụ ịhụ na onye a na-dechapụ dị ka n'azụ ka wheelbase mee mkpụkpu.
Nwere ike iji ndụdụ dị iche iche nyere gị aka ịchọta ebe kwesịrị ekwesị maka ụkwụ ihu gị. Cheta na ị na-akpụ akpụ ụkwụ ihu dị ka ị na-aga n'ihu igwe kwụ otu ebe na n'akụkụ gị. Will ga-agbanwekwa geometry na omume nke igwe kwụ otu ebe, cheta, mana nke ahụ bụ otu ihe ị nwere ike ime ọzọ bụ naanị ịgbanye akpụkpọ ụkwụ nke nwere ike ịbụ otu n'ime ụzọ abụọ dị ọnụ ala karịa ebe a, ọ pụtaghị na ị ga-agbanwe nha nke akpụkpọ ụkwụ ọ ga-ọzọ dị oke obere n'ihi na ị dị nnọọ ka ị ghara ịtụgharị a overlap nsogbu ka overlap nsogbu nwere, ma dị iche iche akpụkpọ ụkwụ nwere dị iche iche shapes na ma eleghị anya, ị nwere ike? Chọta otu ụdị akpụkpọ ụkwụ nke kaara gị mma na nke ikpeazụ bụ crank ogwe aka ogologo Ọ bụ n'ezie akụkọ ifo na ụmụ okorobịa isii n'ogologo ogologo kwesịrị ịdị ka 172 2.5 mm crank ogwe aka ogologo m nwere ike ịgba ọsọ 170, gịnị ga-agbanwe maka m Enwere m ike ịgbanwe nha gia mana ọtụtụ ndị nduzi igwe kwụ otu ebe nwere ike ịgwa gị na ka oge na-aga ị nwere ike ịchekwa ike site na iji iPhone dị mkpirikpi dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ị na-eji obere oge enyere enyere na ị naghị enwe mmetụta dị iche iri asaa na otu iri asaa amaokwu otu iri asaa na abụọ isi ise na-enye m dị ka isi ihe abụọ na ise millimita karịa ohere n'etiti ụkwụ ihu na axis nke pedal, site na anyị pụtara ihe anyị na-atụle, ihe ị na-agbanweghị ga- studs, n'ihi na ndị studs ga-abụ na ha zuru okè n'ebe na ụkwụ gị na m bụ Isiokwu m ga-N'ezie ers t na-eme ya na-esote Bikefeeling merenụ, ya mere na ọ bụ maka obodo a overlap ị kwesịrị ị na-echegbubiga onwe gị ókè nke ukwuu, ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ nnukwu nsogbu nwere ike dochie ụfọdụ akụkụ gị r igwe kwụ otu ebe ma dochie etiti ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị chere na ọ bụ n'obodo Commuter igwe ma ọ bụ na ịchọrọ iji dị ka obere igwe kwụ otu ebe maka ụfọdụ ụzọ ụkwụ isiokwu nyere m isi mkpịsị aka ole na ole ka m wee mara na m ga-emekwu nke ndị a, ọ bụrụ ụfọdụ ndepụta ọkpụkpọ ndị ọzọ masịrị gị na ọwa ahụ, nye m isi mkpịsị aka, atụla ụjọ, m ga-ahụ ihe m ga - ahọrọ gị ya mere ụmụ okorobịa maka nkwado gị wee hụ gị, n'oge na - adịghị anya, biko
Ihe kachasị mkpa bụnwetaa etiti na gị na nwere a ala jiometrị. Ọ bụrụ n ’ịbụ onye na-erughị 170cm ma ọ bụ karịa n’ogologo,26'wiil nwere ike inwe nghọta karịa na aigwe kwụ otu ebena obere. Na obere nha ọ na-abịa26'wiil na28'wiil na nnukwu nha.Ọnwa Ise 13, 2014
Ngwongwo 26 nke anụ ọhịa ahụ dị m mma?
Yabụ,26 sentimita asatọwiil, na aigwe kwụ otu ebeonodu, enwere ikeezimaka onye gbara gburugburu 4′10 ″ -5′2 ″ iji nweta nguzozi kachasị mma n’etiti ibu, ikike iwegharị, na njikwa. Nke a kwuru, maka ịgagharịigwe kwụ otu ebena pavement, e nweghị oke ịgba otú onye na-agba ya nwere ike ịbụ.
Kedu ihe bụ ogologo oche kwesịrị ekwesị maka igwe kwụ otu ebe?
Debe ikiri ụkwụ gị na pedal na pedal azụ iji ruo elekere isii. Ikpere gị kwesịrị ịgbatị kpamkpam. Ọ bụrụ na ikpere gị ka na-ehulata ịkwesịrị ịbawanyeịdị elu, ukpụhọde na obere increments oge ọ bụla, na ọ bụrụ na gị ikiri ụkwụ tụfuru kọntaktị na pedal mgbe ahụ i kwesịrị belata nasadulu.07.31.2015
Mgbe oleị na-agba ịnyịnya ígwè,ụkwụ gị kwesịrịghọọ kpamkpamKwụ ọtọmgbe oleihepedal bụ naiheala ọtụtụ akụkụnkeokirikiri ya. NaiheikpereKwụ ọtọ, naụkwụkpam kpam. Ya mere, ee,ụkwụ gị kwesịrịịbụkwụ ọtọ mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị na-atụ aro ka ha dịrị obere ịgbagọnkeikpere.04/23/2021
Ihe26incher bụ Mkpa ọkụ kaOgbe 27.5ma ọ bụ 29 nke anụ ọhịa ahụ, n'ụzọ dị ukwuu n'ihi na, nke ọma, ọ dị obere karịa ya. N'ịbụ onye pere mpe, na-adị ọkụ ma na-agbasi ike,anyịnya igwena26”Wiil na-enye osooso ka mma karịa ndị ibe ha buru ibu, na-eme ka ọ dị mma maka mkpụmkpụ, elu ugwu na ọsọ ọsọ na-agba ọsọ ọsọ.Febbọchị 8 2016
Kedu ogo dị mma maka igwe kwụ otu ebe nke 26?
Kedu ụzọ kachasị mma iji tụọ igwe kwụ otu ebe?
Ihe kachasị mkpa mgbe ị na-atụgharị igwe kwụ otu ebe bụ ogologo ahụhụ gị. Adaberela ahụhụ gị naanị na nha akwa jeans gị. Kpọmkwem, nke ka mma. Guzo n’azu gị na mgbidi ma gbasasịa ụkwụ gị 6-8 ’iche.
Etu esi atụ ahụhụ maka igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe?
Tinye akwụkwọ (buru ibu) ruo n’ọkpụkpụ azụ gị, n’etiti ụkwụ n’ụkwụ na akwụkwọ ahụ bụ oche ịnyịnya ígwè na ị nọ n’elu ya. Gwa mmadu ka o tughari ogologo site n’ala ulo rue n’akwukwo na centimita. Na ngụkọta nsonaazụ bụ ahụhụ gị maka igwe kwụ otu ebe nke ga-adabara gị nke ọma. Jiri akụkụ gị tụọ akụkụ dị iche iche
Kedu ụzọ kachasị mma iji nweta ahụhụ insect?
Adaberela ahụhụ gị naanị na nha akwa jeans gị. Kpọmkwem, nke ka mma. Guzo n’azu gị na mgbidi ma gbasasịa ụkwụ gị 6-8 ’iche. Debe akwụkwọ n’etiti ụkwụ gị na n’elu mgbidi ahụ, gbagoo elu; bulie ya ruo mgbe snug megide gị crotch (a mimics gị igwe kwụ otu ebe oche).